Magetsi bhasikoro ekuchengetedza matipi (1) | ebike Shuangye
musha Blog Magetsi bhasikoro ekuchengetedza matipi (1)
Magetsi bhasikoro ekuchengetedza matipi (1)
Zuva ： 2021-07-23 Zvikamu:Blog Views: 1,471 maonero
（1） ebike battery haibhadhariswe kana kubhadhara pasi.
1. Kupera kwehupenyu hwebhatiri: chinja kana kugadzirisa bhatiri;
2. Iyo fuse mu fuse mubhatiri yaputswa: chinja fuse;
3. Kusabatana kwakashata pakati pebheteri fuse uye iyo fuse inobata: gadzirisa zvinzvimbo zvevaviri kuti zvibate zvakanaka, kana kutsiva fiyuzi;
4. Chaja haina kana kubuda kwemagetsi kana yakaderera magetsi emhepo: chinja kana kugadzirisajaja;
5. Kusabatana pakati peshaja ne AC 220V magetsi: gadzirisazve magetsi;
6. Chiedza chisina kujairika chejaja chinokonzeresa chenji yakazara: chinja kana kugadzirisajaja.
） 2, Chiratidzo chemagetsi padhibhodhi hachivheneke asi mota yemagetsi inomhanya kazhinji:
1. Iko hakuna voltage pakati peakanaka uye asina kunaka anotungamira dial: chinongedzo chiri mune yakashata kuonana kana lead inotsemuka: batanidza kana shandura waya;
2. Iyo inopenya chubhu yakakuvara: chinja kana kugadzirisa iyo inopenya chubhu;
3. Pane yakavhurika redunhu pane yekudhara redunhu bhodhi: chinja kana kugadzirisa mita redunhu bhodhi.
（3） mota yemagetsi inomira painotenderera:
1. Isina kukwana bhatiri simba: kuchaja bhatiri;
2. Kusangana kwakashata kwevatambi vebhatiri: chinja chinzvimbo cheavo vanobata kana kupolta vanobata;
3. Kusabatana kwakashata pakati pebhauzi yefiyuzi uye chigaro chefiyuzi mubhokisi rebhatiri: gadzirisa kana kutsiva kuti zvive zvakanaka;
4. Kune tsvina mu photosensitive chubhu yeiyo photosensitive firimu mune yekumhanyisa control mubato: suka kana kutsiva iyo photosensitive firimu, pukuta iyo photosensitive chubhu, asi iyo mhosva ichiri haigone kubviswa: kutsiva iyo yekumhanyisa control mubato;
5. Pane kukanganisa mune mutongi: kutsiva kana kugadzirisa mutongi;
6. Iyo yekumberi yekumhanyisa yekumhanyisa mubato unoratidzika kunge watyoka: chinja kana kugadzirisa iyo inotungamira;
7. Iyo brake magetsi-off switch inokundikana: gadzirisa kana kutsiva iyo brake magetsi-off switch;
8. Kusabatana kwakashata mushure mekuvharwa kwesimba: kutsiva kana kugadzirisa kiyi yemagetsi;
9. Virtual kubatanidza kwechibatanidza mumutsara: chiumbanisezve kuti chigone kusangana zvakanaka;
10. Carbon brushes, waya uye mhepo mukati memotokari zvakasungwa kana kubatana: gadzirisa kana kutsiva mota.
） 4, Batidza simba, iyo controller inoshanda zvakajairika, tendeuka mubato, iyo mota yemagetsi haitenderi:
1. Tarisa uone kana tambo yekumhanyisa tambo yeruoko rwerudyi yakabatika, uye kana iyo controller kana mota chinobatanidza yadzimwa;
2. Kunyangwe mabhureki ekuruboshwe nekurudyi akadzimwa.
） 5, Hard kukwira uye kunonoka havukavu:
1. Tarisa kuti mabhureki akakiyiwa here;
2. Kunyangwe iyo yemukati chubhu kumanikidza kwakakodzera;
3. Kunyangwe iro bhatiri voltage yakakwana;
4. Kunyangwe ichidarika muganhu wakadzikira kana mhepo yemusoro.
Kana iwe uchifarira mabhasikoro emagetsi, iwe unogona kupinda pawebhusaiti yedu yepamutemo kuti udzidze zvakawanda nezve zvigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kutirovera kana iwe uine chero mubvunzo. www.vadar.com.
Uye isu takatovandudza magetsi ekuchengetedza bhasikoro (2), kana iwe uchifarira, unogona kupinda pane ino webhusaiti kuti uzive zvakawanda nezve matipi ekuchengetedza. https://www.zhsydz.com/wp-admin/post.php?post=14670&action=edit
Prev: Sei vanhu vachida kupfeka ngowani mumugwagwa?
Next: Zviitiko mukusarudza bhasikoro remagetsi